သငျသညျပြီးသားအလုံအလောက်အခမဲ့ညစ်ညမ်းဗီဒီယိုအကြောင်းအရာခဲ့ကြပြီမဟုတ်လော သင်ပိုမိုဖျော်ဖြေမှုနှင့်ပိုပြီးစွဲငြိဖွယ်ရာရဲ့တစ်ခုခုချင်မနေပါနဲ့။ ကျနော်တို့ဝဘ်ပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးညစ်ညမ်းဂိမ်းကစားခြင်းဆိုက်နှင့်အတူလာအပေါင်းတို့နှင့်တကွကမျြးစာကမိတ်ဆွေတို့ကိုအဘို့ဖြစ်၏။ အခမဲ့မီနိုညစ်ညမ်းဂိမ်း၏စုဆောင်းခြင်းနာမကိုအမှီအကြံပြုအဖြစ်လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါေပမယ့္အလကားပဲလို႔ေတာ့မဆိုလိုပါဘူး။ တကယ်တော့ကျနော်တို့ပရီမီယံဂိမ်းကစားအခမဲ့စေသည်ဆိုက်ဖြစ်ကြသည်။ ကျနော်တို့ဝဘ်ပေါ်မှာအကောင်းဆုံးဂိမ်းရှိသည်လိမ့်မယ်သည့်အခါကျွန်တော်နေသေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကဖွင့်,လူတွေကအမြဲသူတို့ရဲ့အရွယ်ရောက်ပြီးသူဂိမ်းကစားခြင်းအချိန်ကျွန်တော်တို့ကိုရှေးခယျြပါလိမ့်မယ်။, ထိုအကြှနျုပျတို့ဂိမ်းအတွေ့အကြုံနှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်မည်မဟုတ်ကြောင်းကြော်ငြာများနှင့်အတူအသွားအလာအပေါ်အမြတ်ထုတ်ရန်နိုင်ပြီးလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ကိုစွန့်ခွာချင်စေမည်မဟုတ်။
ထိုအကြှနျုပျတို့သေချာယခုအချိန်တွင်အကောင်းဆုံးညစ်ညမ်းဂိမ်းရှိသည်။ ငါတို့သည်သင်တို့ရှိစေခြင်းငှါမဆိုကိရိယာပေါ်တွင်သင်၏ဘရောက်ဇာကိုတိုက်ရိုက်ခံစားနိုငျသောအမာခံလိင်ဂိမ်း၏ကြီးမားသောစုဆောင်းခြင်းနှင့်အတူလာမယ့်နေကြသည်။ ဤဆိုဒ္ရွိဂိမ္းအားလံုးသည္အက္ပလီေကးရွင္းကိုအသံုးျပဳ၍တည္ေဆာက္ထားေသာေၾကာင့္အရာအားလံုးေခ်ာေမြ႕ၿပီးၾကည့္ေကာင္းေစမည့္နည္းပညာအသစ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ဒါဟာအစအရာအားလုံးလက်ဝါးကပ်တိုင်ပလက်ဖောင်းနှင့်စိတ်ကြိုက်စေသည်။ ထိုအသင်တို့သည်ငါတို့ဆောင်ခဲ့ဂိမ်း၏အကြီးအကျယ်အမျိုးမျိုးကိုတွေ့မြင်သည်အထိစောင့်ပါ။ သငျသညျအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုညစ်ညမ်းခံစားများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေရှိလိမ့်မည်သည့်အခါသင်သည်အစဉ်အဆက်,ညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်တွေကိုစောင့်ကြည့်ချင်မည်မဟုတ်။, သငျသညျအစဉျအမွဲအိပ်မက်မက်င့်အရာအားလုံးကဒီစုဆောင်းမှုထဲမှာပျော်မွေ့နိုင်ပါသည်။ ထိုစိတ်ကြိုက်အင်္ဂါရပ်များနှင့်အတူ,သင်တို့ရှိသမျှသည်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုလူတစ်ဦးပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ပေါ်တွင်ယူဆောင်လာသည့်ဂိမ်းမျိုးနှင့်ပတ်သက်၍အောက်ပါအပိုဒ်များတွင်ဆိုက်ကိုယ်တိုင်အကြောင်းပိုမိုပြောဆိုကြပါစို့။
သငျသညျအမျိုးအစားများစာရင်းနှင့်ငါတို့သည်ဤစုဆောင်းမှုစုစည်းဖို့အသုံးပြုသောသော့ချက်စာလုံးစာရင်းအားဖြင့်အံ့သြလိမ့်မည်။ စိတ်ကူးယဉ်မှုအမျိုးမျိုးကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်တွင်ပျော်မွေ့နိုင်ပြီးကျွန်ုပ်တို့သည်သင်အကြိုက်ဆုံးလိင်ပြွန်ကဲ့သို့အမျိုးမျိုးနှင့်အတူလာသည်။ ဒီဆိုဒ်ကိုဖန်တီးလိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်ဂိမ်းတွေမှာပါဝင်ရမယ်ဆိုတာသိလာပါတယ်။ ငါတို့သည်လည်းကျနော်တို့ကညစ်ညမ်းအရည်အသွေးနှင့်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအရည်အသွေးကိုနှစ်ဦးစလုံးကမ်းလှမ်းသေချာအောင်ဘာမှပြေးစမ်းသပ်ဖို့ရှိသည်ကြောင်းကိုငါသိ၏။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပလက်ဖောင်း၏အများဆုံးကစားဂိမ်းတချို့ကစိတ်ကူးယဉ်ဆန်သောလှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူလာမယ့်သူများဖြစ်ကြ၏။ အခြေခံအားဖြင့်,ဤဂိမ်းများတွင်သင်သည်သင်၏စိတ်ကူးယဉ်အချို့အသက်ရှင်ရ. သင်အမြဲတမ်းရင်မဆိုင်ချင်ဘူးလို့ပြောပါရစေ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုဒ်၏မဖွယ်မရာဂိမ်းများဖြင့်သင်သည်သူ၏မေမေကိုလွှတ်လိုက်သောသား၏ရှုထောင့်မှအရေးယူမှုကိုခံစားလိမ့်မည်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်ဆရာလိင်ဂိမ်း,အတွင်းရေးမှူးညစ်ညမ်းဂိမ်းနှင့်အများကြီးပိုဤဂိမ်းများတွင်များစွာသောအခြားစိတ်ကူးယဉ်ရှိသည်။
ကာတွန်းများ၊ကာတွန်းများ၊ခေတ်ရေစီးကြောင်းရုပ်ရှင်များနှင့်ပင်ဗီဒီယိုဂိမ်းများမှဇာတ်ကောင်များနှင့်လိင်ပါ ၀ င်သည့်ရုပ်ပြောင်ဂိမ်းများလည်းပါ ၀ င်သည်။ ရုပ်ပြောင်အပိုင်းအတွက်ဂိမ်းအများစုမှာသင်လိုချင်သို့သော်သင်ဤဇာတ်ကောင်ရလိမ့်မည်ဟုအဓိပ်ပာယျလိင်ဃအရေးယူနှင့်အတူလာမယ့်နေကြသည်။ သို့သော်ဂိမ်းအချို့ကိုသင်ဂိမ်းအပျင်းပြေရုပ်ရှင်သို့မဟုတ်ကာတွန်းများ၏မူလဠာအားဖြင့်မှုတ်သွင်းစွန့်စားပျော်မွေ့ရသောအရွယ်ရောက်ပြီးသူကျောဇောဖြစ်ကြသည်။
ကျနော်တို့ဆိုက်ပေါ်တွင်ညစ်ညမ်း၏ဂိမ်းများနှင့်အမျိုးအစားများစွာသောအခြားအမျိုးအစားများရှိသည်။ ကလေးမွေးဖို့အကြောင်းဖန်လာတဲ့မေမေတို့ကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ကိုယ်ဝန်ဆောင်နို့တိုက်ဂိမ်းတွေနဲ့လာပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ခြေရင်းဂိမ်းများ၊ဟန်းနီးမွန်းဂိမ်းများနှင့်ပင်နဂါးလိင်ဂိမ်းများနှင့်အတူလာသည်။ ကျနော်တို့တောင်မှသင်မီယာများ၏ရှုထောင့်ကနေအရေးယူကစားရန်ရသောဂိမ်းများရှိသည်။ ယနေ့ညကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ပေါ်မှာရှိအရာအားလုံးကိုစူးစမ်း!
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ပေါ်မှာရှိသမျှအမာခံညစ်ညမ်းဂိမ်းကစားခြင်းယနေ့ညသင်ဤမျှပျော်ရွှင်စေပါလိမ့်မယ်။ သင်လိုအပ်သောအရာကိုအတိအကျရှာတွေ့လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့သိသည်၊ကျွန်ုပ်တို့၏အန်းဒရွိုက်ကိရိယာများသည်သင့်အားလျင်မြန်စွာပြုလုပ်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။ သင်တစ်ဦးဂိမ်းကြိုက်နှစ်သက်ပါလျှင်,ကအပေါ်မှတ်ချက်ပေးရန်နှင့်နှုန်းဖို့မေ့လျော့ကြပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်၏အသိုင်းအဝိုင်းအင်္ဂါရပ်များကိုအဘယ်သူမျှမမှတ်ပုံတင်နှင့်အတူအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ သင် 18 သို့မဟုတ်အဟောင်းတွေဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုထက်အခြား,သင်တို့သည်ငါတို့၏ပလက်ဖောင်းအပေါ်အမာခံဂိမ်းကစားပျော်မွေ့မတိုင်မီဘာမှလုပ်ရန်မလိုပါ။ မီနာကောင်းကင်ဘုံမှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်!